Snn Nepal रामायण के हो ? – Snn Nepal
रामायण के हो ?
धेरैले टेलिभिजनमा रामायण हेर्नु भएको होला । कतिपयले रामायण पढ्नु वा सुन्नु भएको पनि होला । तर रामायण के हो भने थाहा छैन भन्नेहरुलागी यहाँ दिइएको जानकारी उपयोगी हुन सक्छ ।
रामायण भनेको रामले हिडेका बाटो देखाउने पद्धतिको हो । रामायण आफैँमा एक धर्म समेत मानिन्छ । सत्मार्गमा हिड्ने प्रेरणाले भरीएको रामायणमा रामको आचरण नै मुख्य केन्द्र हो । रामायण धेरैवटा छन् । योगवाशिष्ट महारामायण, मूल रामायण, अध्यात्म रामायण, वाल्मिकीय रामायण, अद्भूत रामायण, आनन्द रामायण, काकभुसुण्डी रामायण, भविष्य रामायण, भानुभक्तीय रामायण र तुलसीकृत रामायण आदी पर्दछन् ।
वाल्मीकीय रामायण, आनन्द रामायण, भानुभक्तीय रामायण नेपालमा पढ्ने गरीन्छ । सबैभन्दा पुरानो रामायण वाल्मीकीय रामायण हो । जसलाई संसारकै आदी महाकाव्य मानिएको छ । महर्षी वाल्मीकद्वारा रचित यस रामायणमा २४ हजार श्लोक रहेका छन् ।
रामले पत्नी सीता र भाइ लक्ष्मणको साथमा १४ वर्ष वनवासमा बिताएका थिए । यसैबेला रावणद्वारा सीता अपहरणमा परेकी थिइन् । रामायणका सूत्राधार दशरथ र पत्नी कैकेयी हुन् । यसका मुख्य पात्रमा दशरथ पुत्र राम, जनक पुत्री सीता, रावण छन् । सहायक पात्रमा रामका सेवक हनुमान, भाइ लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न छन् । रामायणका सबै घटना हुनुमा लङ्काधिपति रावणकी बहिनी सुपर्णखाको भुमिका मुख्य मानिन्छ ।
रामका कुल गुरु महर्षी वशिष्ठ र विद्या गुरु विश्वामित्र हुन् । वशिष्ठ का बाबु महर्षि मित्रावरुण र आमा उर्वशी अप्सरा हुन् । विश्वामित्र भने क्षेत्रीय राजा विश्वरथबाट तपस्याको बलले महर्षि पदमा पुगेका थिए । रामायण मूलतः करुण रस प्रधान महाकाव्य हो तर प्रसङ्ग अनुसार वीर, रौद्र, भयानक आदि सबै रस प्रयोग भएका छन् ।